Waa maxay THRIVE qaboojiyaha Cuntada?
KHARASHKA nolosha SIYAASADA wuxuu qallajiyaa qadka soosaarka cuntada ee qallalan wuxuu ka kooban yahay miraha, khudaar, hilibka, digir, badar, caanaha, iyo xitaa cabitaanno caafimaad leh iyo cuntooyin, inay kuu badbaadiyaan safar aad ku tagto dukaanka raashinka mar kasta oo aad dhameyso waxyaabo muhiim ah sida ukunta ama caanaha.
Maxaa yeelay, waxaa la soo saaray ay baraaraan qorshaynta menu maalmeedka, ayaan waxaan ka sameeyey howlgalka si loo hubiyo in cuntada aad cunaya tahay dhadhanka weyn! Si ka duwan waxyaabaha kale kaydinta cuntada in aad iska oo aan marnaba qarsoon loo isticmaalo, Cuntooyinkan ayaa lagu baaro waqtiga iyo waqti mar kale si loo xaqiijiyo in ay u ageegi wiilal iyo dhadhan weyn. Iyada oo THRIVE cuntooyinka, dhadhanka weyn tahay heerka - ma marka laga reebo.
Easy-to-samaynaysaa cuntada ku jiraan qasac kasta oo THRIVE si aad u doonaa in aan marnaba la yaaban yihiin sida loo isticmaalo kaydinta cuntada aad soo iibsato. Sababtoo ah waxaan dooneynaa qoyskaaga inay ku raaxaystaan ​​dhadhanka fiican iyo nafaqada ay suuragal tahay, oo dhan of our cuntada ayaa si gaar ah loogu talagalay THRIVE alaabta.
Kafaala qaaday: Bixinta Khamriga